काठमाण्डौमा हुने अनौठो प्रकृतिका चोरीका घटना प्रहरीका चुनौती बनेका छन : प्रहरी प्रवक्ता - TV Annapurna
पछिल्लो समय राजधानी लगायत देशका विभिन्न सहरमा चोरी डकैतीका घटना वृद्धि भइरहेका छन् । विगतमा भएका चोरीका घटनाको प्रबृती हेर्दा विभिन्न तरिका अपनाई चोरी गरेको पाइएको छ ।
राजधानी काठमाडौँमा त झन् दिउँसै विभिन्न खालका चोरीका घटना हुन्छन् । काठमाडौँमा चोरी गर्ने समूह नै सक्रिय बन्दै गएका छन् ।
पछिल्लो समय चोरीका घटना र प्रबृतीहरु के कस्ता छन् ? यसै विषयमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता शैलेश कुमार क्षेत्रीसँग टिभी अन्नपूर्णकर्मी विमल खड्काले कुराकानी गर्नुभएको छ ।
प्रस्तुत छ वहाँसँग गरिएको कुराकानीः
पछिल्लो समयमा धेरै चोरीका घटना भइरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ ,खासमा प्रहरी कार्यालयमा कस्ता खालका चोरीका घटनाहरू आउने गरेका छन् ?
चोरीको अनुसन्धान गर्ने मुलुकी ऐन छ । जसमा चोरीका घटनालाई ४ समूहमा विभाजन गरिएको छ । साधारण तरिकाले चोरी गरेको छ भने त्यसलाई साधारण चोरी भनिन्छ । चलनचल्तीमा भन्दा अन्यत्र तरिकाले गर्ने चोरीलाई रहजनी चोरी भनिन्छ । भने बाटोघाटोमा चोर्ने चोरीलाई नकबजनी चोरी भनिन्छ । यो सँगै चार भन्दा माथिका सङ्गठन मिलेर चोर्ने तरिकालाई डाका चोरी भनिन्छ । यसको नाम गम्भिरताको हिसाबले तय गरिएको हो । सरदर वार्षिक रूपमा देशभर १३ सय देखि १५ सय सम्म यस्ता घटना हुने गर्दछन् । यसमा सवारी चोरी र पुरातात्वीक चोरी पनि हुन्छ । अहिले सम्म ७० प्रतिशत भन्दा बढी चोरी साधारण तरिकाले हुन्छ । आमनागरिकको लापरबाहीले गर्दा यो चोरी हुन्छ । यसमा स्वयम् व्यक्तिले रोक्न आफै सहजकता अपनाउने र प्रहरीको पनि सहयोग भयो भने नियन्त्रण सकिन्छ ।
चोरहरूले अनेक तरिका अपनाएर चोर्ने गर्छन् भन्ने सुनिन्छ , कस्तो तरिका अपनाएको घटनाहरू पाउनु भो ?
चोरीका अनौठा प्रकारका घटना पनि हामीसँग रेकडेट छन् । कतिपय अवस्थामा स्थान विशेषमा चोरी गर्ने मानिस रहने र जागिरको रूपमा चोर गर्न आर्काे ठाउँ जाने हुन्छ । दोस्रो प्रकृतिका चोरी भनेको दिउँसोमा हुने चोरीले बाइकमा चढेर गरगहना लुटेर भाग्ने घटनाहरू, तेस्रो प्रकारको चोरी भनेको महिलाको कपडामा फोहोर लगाएर चोर्ने गर्दछन् । कतिपय चारहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर चोरी गर्छन् । उनीहरू विशेष कलामा निपुर्ण हुन्छन् । चोरीहरुले विभिन्न तरिकारले चोर्ने गर्दछन् । एक चोरीले चोरेको सामान फेरी अर्को चोरले चोरेको सम्मका घटनाहरु आउँने गर्दछन् । चोरका पनि महाचोर
०७४। ७५ मा चोरीका घटनाहरु कति भएका छन् ?
चोरीको तथ्याङ्क हेर्दा साधारण चोरीका घटनाहरू धेरै छन् । २०७४ । ७५ मा साधारण चोरीको सङ्ख्या ९२५ छ । भने रहजनी चोरी ९, डाका चोरी २१, नकबजनी चोरी ८४, जबरजस्ती चोरी २९, सवारी चोरी ७८, पुरातात्विक चोरी १ र चौपाया चोरी १२ गरी ११४९ का चोरीका घटनाहरू भएको नेपाल प्रहरीसँग तथ्याङक छ । यसरी हर्दा ७३ ।७४ मा ७० प्रतिशत चोरीका घटना थिए भने यो ७४ । ७५ मा ७९ प्रतिशत चोरीका घटना भएका छन् ।
चोर्नेमा संलग्न प्राय कुन उमेरका मानिस पाउनु भयो ?
चोरीको प्रकृतिका हेरेर हुन्छ । पकेटमार चोरीको कुरा गर्दा १३ बसदेखि १९ वर्ष सम्मका युवाहरू भेटिन्छिन् । त्यो भन्दा माथिका ३२ वर्ष सम्मका युवाहरूले मोटरसाइकल प्रयोग गरी चोर्ने गरेको हामीले भेट्छौ । कतिपय चोरहरू अदातलले कारबाही गरेर फकिसेको युवाहरू सजाय पाएर आएरपनि चोरीमा संलग्न भएको हुन्छ ।
चोरीमा महिलाहरूको संलग्नता छ कि छैन ?
चोरीमा महिलाको संलग्नता छैन भन्न सकिन्न । तथ्याङ्कमा हेर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या कम छ । महिलाहरूले आफ्नो मान्छेलाई प्रयोग गरेर चोर्ने गरेको घटनाहरू पनि छन् । यसरी हेर्दा महिला हुँदै नभएको होइन तर पुरुषको तुलनामा कम छन्। यदि कसैको केही बहुमूल्य सामान हरायो भने हाम्रो १०० नम्बरको टेलिफोन छ । फेसबुक पनि छ यिनैमा सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीले सक्रियाता पूर्वक हेर्छौ ।
विशेष गरी चोरीका घटना बढी कुन समयमा हुन्छ ?
सामान्यतया चोरी रातीमा हुन्छ । तर आज भोलि चोरीका घटनाहरू साँझ भन्दा दिउँसोमा हुने गरेका छन् । काठमाडौँ जस्ता अन्य ठुला सहरमा पनि यस्ता चोरीका घटनाहरू दिउँसोमा हुने गर्दछ । तर दिर्धकालीन रूपले चोरीका घटनाहरू रातीमा नै बढी देखिन्छन् ।
नेपाल प्रहरीले चोरी नियन्त्रणमा गरेका प्रयासहरू के के छन् छोटकरीमा बताइदिनुस् न ?
प्रहरीको उपस्थितले मात्रै चोरी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने होइन । सबै चनाखो भएपछि चोरहरूलाई केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसमा प्रहरीले गर्ने सहयोग रहिरन्छ । त्यसका लागि स्वंयम् आफै चनाखो भएमा चोरीका घटनाहरू कम गर्न सकिने देखिन्छ । चोरिलाई नियन्त्रण गर्न सबै भन्दा आवश्यक भनेको सबुत हो । त्यसैले प्रहरीलाई गाली मात्र गर्नुभन्दा आफ्नो सुरक्षामा आफै ध्यान दिए चोरीका घटनाहरू कम हुन्छन् ।
अन्त्यमा आमजनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
आम जनताकाको सुरक्षाको लागि हामी बसेका छौँ । कसैलाई कहीँ कतै अप्ठ्यारो परेमा हामीलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछु । चोरीको विषयमा स्वंयम आफूले विशेष तरिकाले ख्याल गर्नुपर्दछ । यही भन्न चाहान्छु ।
यस्तो छ ट्रम्प किमको ऐतिहासिक भेटवार्ताको सहमति
विश्वकप फुटबलसँगै यौन प्यास मेटाउन पुग्दैछन् यी देशका करोडौँ यौनकर्मी